TALOOYINKA SARE EE MIIQYADA SII KORDHAYA EE GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Sababtoo ah qaabkeeda aan caadi ahayn, quruxda jilicsan ee jilicsan, miiqyada ayaa loo tixgeliyaa calaamad daahir iyo daahir la'aan. Ilaa hadda, ubaxyadaas waxay qurxiyaan xafladaha iyo xafladaha badan ee diimo badan.
Ma suurtagal in la beero ubax guriga dhexdiisa
A ubaxyada ubaxu waxay qurxisaa guriga ma aha oo kaliya leh quruxda ubaxa iyo cagaarka dhalaalaya, laakiin sidoo kale leh caraf udgoon joogta ah. In duurka, in ka badan 300 noocyada ubaxa kuwaas loo yaqaan. Thanks to doorashada ee ubax lagu beeray karo oo lagu badhxay guriga, ee ubax. Lily ma ahan mid la dooran karo oo ku saabsan shuruudaha, waxayna ku kori kartaa hal koob oo dhowr sano ah.
Haddii aad qaadato waqtiga saxda ah ee saxda ah iyo siinta daryeelka ugu haboon ee waqtiga geedka, ka dibna waxaad si fudud u barbar dhigi kartaa burooyinkeeda ubax leh dabaal kasta. Iyadoo ku xiran kala duwanaanta, ubaxa ayaa kori kara ilaa hal mitir iyo badh.
Ma taqaanaa? Suugaanta Giriigga ah ayaa waxay yiraahdeen: "Cibaadada qaaliga ah ee Hera, oo wax yar ka qarsoon, Hercules way ka qarsoonteeda, waxay go'aansatay in ay naas nuujiso, Ilmuhu wuxuu dareemayaa cadawga iyada oo yar, Caanaha ayaa ku duubay cirka iyo Caadkii Cadaanka u muuqday, oo dhowr dhibcood ayaa ku dhacay dhulkuna wuxuu noqday lafo. "
Sida loo abuuro ubax qaali ah, dhirbaaxada sii kordhaysa
Waqtiga ugu fiican ee lagu nadiifiyo nalalka ubaxa ee daaqada guriga waa March-April. Haddii aad ku shubto nalalka noocyo kala duwan hal weel, waxaad heli doontaa ubax yar yar oo ubax ah inta lagu jiro ubax.
Markaad soo iibsato wax beerto, fiiri nalalka. Waa inay noqdaan kuwo adag, oo xididdada leh, aan lahayn waxyeelo ama dhibco madow. Marnaba ma jeexi xididdada, iyo cabbirka basasha waa in aan ka yareyn 4 cm dhexroor. Ku rid qaboojiyaha ka hor inta aadan beeran 3 wiig.
Waa muhiim! Haddii nalalka guluubka la qalajiyey, ku hay biyo nadiif ah ilaa 2 saacadood.
Cabbirka dheriga wuxuu ku xiran yahay dhererka mustaqbalka dhirta. Haddii aad aragto in la gaaro nus dhererka mitirAwoodda waa inay noqotaa 40 cm qoto dheersidaa daraadeed ubadka ayaa si ammaan ah u saari kara is-diidmo sii kordhaya.
Marka la beero guluubka halbeegga ah, dooro dheri leh goobo yaryar - 20 cm.
Haddii kale, geedka ayaa bilaabi doona inuu buuxiyo booska bilaashka ah "carruurtooda". Sababtan awgeed, ma udhaqaaqi doono dhawaan Bloom.
Ka hor inta aadan beerin ubax, qaado ciidda saxda ah ee loogu talagalay. Xulashada ugu fiican waxay noqon kartaa isku dar ah dhul sodium kala badh oo humus ah. Haddii aad soo iibsatay ciidda diyaar u ah, waa in la nadiifiyaa. Biyaha carrada tooska ah ee dheriga leh xal biyo karkaraya leh fungicides iyo daloolka potassium.
Waxaad ku beeri kartaa wakhti kasta oo sanadka ah, laakiin haddii aad rabto in aad qurux ku ubaxu ku on balakoonka ee May, ku beeri nalalka saddexaad ee labaad ee March. Layla waa mid aan hoos u dhicin, laakiin qaar ka mid ah shuruucda ku haboon iyo daryeelka guriga waa lagama maarmaan in la ilaaliyo.
Ka hor intaan la beeri, ku rid dheecaan hoose ee dheriga: qiyaanaha, lebbiska jaban ilaa 5 cm. Markaas ku shub ciidda 10 cm dhererka, soo saar nalalka, riixaya dhulka. Ka dib markaa, ku dar lakabka kale ee carrada laba jeer ka badan sidii hore iyo ku shub, si siman u qaybinta qoyaan.
Xeerarka daryeelka caamyada ee qolka
Waxay ku siiyeen ubax dufan, oo aadan aqoon sida loo daryeelo - maqaalkani waxaan fiirin doonaa dhammaan muddooyinka horumarkiisa. Ka dib beerashada, dhirta waxay u baahan tahay daryeel habboon. Ubax ayaa marka hore la quudin karaa arrimo dabiici ah kaddib marka uu soo baxo sprouts; inta lagu jiro xilliga koritaanka, waxaad kicin kartaa ubadka adoo ku buufinaya "Kornevina" laba jeer toddobaadkii.
Toddobaadkii kaddib bacriminta ugu horreysa, u samee habka labaad ee leh halabuurka ee potassium-fosfooras. Marka la gaaro geedo 10 cm, buuxi dheriga dheriga ilaa sare. Cabbitaanka dhexdhexaadka ah waa inuu noqdaa maalin kasta.
Rugta hal bil ayaa laga yaabaa inay soo gaadhsiiso hawo cusub, si tartiib tartiib ah u socodsiinaysa "socodka" 30 daqiiqo illaa 10 saacadood. Ha u oggolaanin in geedka ay joogaan heerkul ka hooseeya 10 ° C. Inkasta oo ubaxyada aan ubax lahayn, ku buufin ubaxyada maalin walba.
Daryeelka warshad inta lagu jiro xilliga ubaxa firfircoon
Si aad si fiican u daryeeshid geedka, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida biyaha loo dhajiyo dheriga waqtiyo kala duwan noloshooda. Inta lagu jiro Bisaylkiisa ee burooyinkeeda, bacarimaanta soo noqnoqota ayaa la sameeyaa.
Si loo hubiyo ubax qurux badan, waxaa lagama maarmaan ah in la daboolo qaybta sare ee ciidda marar badan, hubinta ogsijiinta nidaamka xididka. Warshad ubax ah ayaa la waraabiyaa 2 asbuuc walba, caleemaha waxaa lagu buufin karaa marar badan.
Haddii ubaxa ay siisay burooyin badan oo culus, xir xididka si ay u taageeraan si aysan jebin miisaanka ubaxa. Ma noqon doonto mid macquul ah in lagu qurxiyo ciidda qoryaha alwaax, tani waxay ku dari doontaa geedka raaxada iyo maskaxda ubax.
Sida loo daryeelo ubax ka dib ubax
Ka dib markii ubaxu ay ubaxday, oo dhammaan tufaaxu hoos u dhaceen, waxaad u baahan tahay inaad sugto qalajinta iyo jaalaha ah ee afkoda. Inta lagu jiro muddadan, biyaha hal mar asbuucii, oo ay ku qasban yihiin bacriminta bacriminta macdanta iyo arrinka organic.
Maba lagama maarmaan in la buufiyo caleenta, sababtoo ah inta lagu jiro muddadan oo dhan nafaqooyinka ka soo afkoda u noqdaan nalalka iyo foomka ku hari dhalidda ee xilliga beerto xiga.
Marka ay laamaha geedka gebi ahaanba qalalan, waraabinta joojinta. Hadda waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loo dabooli lahaa saliida qolka.
Duufaannada la qalajiyey ayaa si taxadar leh looga gooyey, sanduuqyada ayaa sidoo kale laga saarayaa si ay ubaxu u dhamaystirto.
Digniin! Waa mid aan loo baahnayn in la gooyaa laamaha - iyaga, xitaa kuwa qallalan, nafaqooyinka soo uruuriya waxay yimaadaan basasha.
Haddii aad go'aansato inaad ka baxdo ubaxaaga guriga ka dib markaad ubax ku jirto dheriga carrada, ubadka sidoo kale waxay u baahan tahay daryeel. Ku dar dambi carrada oo si joogto ah u quudi. Biyaha badanaa lagama maarmaan maahan. Ku hay dhirta meel qabow.
Qalabka laysu beddelo: marka loo baahdo iyo sida loo sameeyo
Lily waxay u baahan tahay in la soo celiyo sanad walba, si buuxda u bedesho carrada daalan. Inta lagu jiro muddada ubax, dhirta ayaa soo jiidatay dhammaan waxyaabaha iyo walxaha lagama maarmaanka u ah koritaanka iyo horumarka, carrada ayaa madhan.
Waa muhiim in la ogaado sida habboon ee loo daryeelo ubadka qoysaska wakhtigaas.
Qodobka ugu muhiimsan waa si loo diyaariyo dhirta si sax ah oo aan u dhicin markay gooyaan guluubka. Lily ayaa si taxadar leh loo qoday dheriga, basasha waa kala go ', nadiifiyaa oo maydhay. Maadooyinka ugu yar ayaa isla markiiba lagu beeray sanduuqyada oo la kariyey xilliga jiilaalka.
Xiiso leh Qaar badan oo ka mid ah qurba-joogtu waxay u arkaan calaamadahoodii: Roomaanku waxay calaamad u yihiin rajo, Masiixiyiin sida xushmada leh, Giriigta sida jacaylka, iyo Faransiiska sida naxariis iyo caddaalad.
Duufaanta foosha guriga
Lily waa mid fudud oo labadaba daryeelka iyo markaad guriga ku kortay. Waa laga kori karaa abuur, laakiin waxaa loo tixgeliyaa sida ugu fudud oo la aqbali karo habka bulubous.
Nalalka ayaa eegaya: haddii ay jiraan lebbiska kalluunka ama nabarrada. Meelaha ay waxyeeladu ka soo gaadhay waa la jaraa oo jeermi lagu nadiifiyaa, haynta nus saac gudahood xal manganese, qalajiyey. Nalalka lagu keydiyo qabow illaa February-March.
Waxaad ku dhufan kartaa ubaxa habka jilicsan. Seeds waxaa lagu beeray dhammaadkii Maarso ee sanduuqyo leh biyo-diyaargarow iyo ciid. Ku rid abuurka fogaan hal mitir iyo badh.
Sanduuqa ku rid kuna dabool dabool caag ah. Waraabinta waa in ay ahaato mid dhexdhexaad ah, heerkulka qolka, iyo meesha lagu keydiyo geedo - si liidad iftiin leh.
Iyada oo dhammaan xaaladaha beerashada, ubaxa guriga muddo dheer ku farxi doonaa ubaxyo qurux badan.
Hortada zucchini hore - abuur ama geedo
Alfalfa: sida loo isticmaalo siderata